eNasha.com - सित्तैमा पारपाचुके जित्नुस् !
अष्ट्रेलियाली एउटा पुरुष म्यागेजिनले एउटा प्रतिस्पर्धाको आयोजना गर्दै जित्नेलाई श्रीमतीसँग पारपाचुके गरिदिने पुरस्कारको घोषणा गरेको छ ।
जु साप्ताहिक पत्रिकाले सो घोषणा गरेको हो । यस प्रतिष्पर्धाले विवाहितहरुलाई पनि 'कुमार केटो' हुने अवसर प्रदान गर्ने पत्रिकाले बताएको छ ।
यस पत्रिकाले विजेता प्रतिष्पर्धीमध्ये एकलाई पाँच हजार पाउण्ड बराबरको पारपाचुके प्याकेज उपलब्ध गराउने छ । जसमध्ये वकिलको शुल्क, अदालती खर्च, त्यसपछिको खुशियालीमा दिइने "डिभोर्स पार्टी", त्यो पनि चहकिला मोहक केटीहरुसँग !
यस पार्टीमा तीन तहको डिभोर्स केक हुनेछ, जुन सबै सहभागीलाई खुवाइने छ ।
विजेताले पार्टीमात्र होइन श्रीमतीसँग पारपाचुके भइसकेपछि घरको सफाईका लागि दुइ महिनासम्म सित्तैमा सफाई कर्मचारी खटाइदिने भएको छ । त्यसपछि प्लाज्मा टिभी, प्लेस्टेशन थ्री र एक वर्षसम्म पत्रिकाको ग्राहक पनि सित्तैमा बनाइने भएको छ ।
जु पत्रिकाका सम्पादक पल मेरिल भन्छन्- "यो कम्पिटिशन हाम्रा पाठकका लागि आफ्नो स्वतन्त्रता हासिल गर्ने ज्यादै सुनौलो मौकाका रुपमा आएको छ ।"
"यदि वैवाहिक जीवन असफल हुन्छ भने त्यो ज्यादै दुःखको कुरा हो, तर हामी हाम्रा पाठकलाई त्यो अवसर दिँदैछौँ, जसले जीवनलाई नयाँ तरिकाले जिउने वातावरण मिल्छ । हामी तिनलाई हरेक पाइलामा सहयोग गर्न चाहन्छौँ, एउटा प्लाज्मा टीभी किन्ने कामदेखि पार्टी दिने कामसम्म र नयाँ केटी साथी भेट्टाइदिनेसम्म !" सम्पादकले बताए ।
त्यसो त यो पत्रिकाले पहिलो पटक यस्तो योजना अघि सारेको भने होइन । यसअघि पनि यसका पाठकहरुकी केटी साथीको छातिको आकार बढाउने अफर दिएको थियो । त्यसका लागि सबैभन्दा सानो छातिको आकार भएकी एक महिलाले प्रतियोगिता जितेकी एनानोभा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।
श्रीमानश्रीमती विज्ञापन मुद्दा मामिला माया सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल बलिउड भव्यता इन्टरनेट नग्नता फट्याइँ मूर्ख्याइँ उपाय उदेकलाग्दो परिस्थिति हलिउड कीर्तिमान उदारता प्रविधि